Mogadishu Journal » 2018 » August » 9
Taliska xoogga dalka oo ka jawaabay warbixintii Foreign Policy
Mjournal :-Kadib Wargeyska Foreign Policy maqaal uu daabacay shalay ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladaha ay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka, wuxuuna Soomaaliya ku tilmaamay dal ciidan la’aan ah. Wargeyska Foreign Policy ayaa waxa uu soo xigtay Korneel Ka tirsan AMISOM gaar...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu ku magacaabay Garsooreyaasha Maxkmadda Sare ee dalka, keddib soojeedin ka timid Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Mudane Baashe Yuusuf Axmed. Garyaqaannada uu Madaxweynuhu u magacaabay...
Wasiir Beyle oo kulan la qaatay wafdi ka socday midowga Yurub
Mjournal :-Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. C/raxmaan Ducaalle Beyle ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabilay Wafdi ka socda Midowga Yurub oo ay ka wada hadleen arrimaha Soomaaliya. Wasiir Beyle ayaa sheegay in Wafdiga ka socda Midowga Yurub ay ka wada hadleen...
Ra’iisal Wasaare Kheyre oo shaqo joojin ku sameeyay Wasiir kuxigeenka A Dibadda
Mjournal :-Wareegto ka soo baxday Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa shaqada looga joojiyay Wasiir kuxigeenkii Arrimaha Dibadda Mukhtaar Mahad Daa’uud. Hanti dhowrka guud ee Qaranka ayaa dhowaan ku soo oogay Wasiir kuxigeenka dacwad ku saabsan kutagri...
Ciidamo la soo dhigay jidadka Muqdisho
Mjournal :-Ciidamo ku labisan dharka Booliska ayaa la soo dhigay qeybo ka mid ah waddooyinka magaalada Muqdisho, iyadoo ciidamadan ay yihiin kuwii horay loo bedelay ee ka tirsanaa Xasilinta ee hoos tagayay Taliska Nabadsugida Gobolka Banaadir. Ciidamadan ayaa lagu arkay qeybo ka...
Mario Balotelli ayaa boggiisa Instagram ugu jawaabay taageere, kaas oo waydiiyay sababta uusan ugu soo biirayn Napoli, maadaama lala xiriirinayay xagaagan in uu isaga dhaqaaqayo kooxdiisa Nice. Balotelli oo kamid ah xidigaha aan lagaban hadalka ayaa taageerihii waydiiyay...
Mjournal :-Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya halka uu ku dambeeyo Madaxweynihii is casilay ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo maalin ka hor ay Ciidamada Milateriga Itoobiya ka kaxeysteen magaalada Jigjiga. Wararka ayaa sheegaya in Cabdi Ilay uu...
Mjournal :-Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Canada ayaa ka hor yimid go’aanka dowladda Soomaaliya ay ku garab istaagtay Sacuudiga, khilaafka kala dhaxeeya dalka Canada. Isku dhaca labada dal ayaa yimid kadib markii Canada ay u jeedisay Sacuudiga sii deynta Rayf Badawi iyo...
DF oo ka hadashay sababta ay ku taageertay Sacuudiga
Mjournal :-War qoraal ah oo shalay ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay garab taagan tahay Sacuudiga, islamarkaana ay ka soo horjeedo in fara gelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa faah...
Mjournal :-Wararka laga helayo dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan degmada Dhagax-buur ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka Liyuu Boolis iyo Millatariga Itoobiya ay isku hor fadhiyaan halkaasi. Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib xiisadii ka dhalatay sida magaalada...